Sida loo xannibo lambar taleefan oo ku saabsan Android: Dhammaan jidadka | Androidsis
Nasiib darrose, waxaa had iyo jeer jira lambar taleefan oo na soo waca oo waxaan u aragnaa wax laga xumaado. Ama in daqiiqad gaar ah aanan rabin inaan xiriir la yeelano qof gaar ah. Xaaladahaas, waxaan leenahay suurtagalnimada in la xakameeyo lambar taleefan oo ku saabsan Android. Waxay noqon kartaa qof aan ku hayno ajendaha ama si fudud lambarka taleefanka ee nala soo hadlay.
Nidaamka la raacayo waa mid fudud, oo aan ku fulin karno jadwalka ku jira Android ama barnaamijka taleefanka. Marka labada qaabba waan awoodnaa xannibi qof taleefankeena casriga ah. Tani waxay ka dhigan tahay lambarka taleefanka ee la yiri ma awoodi doono inuu na soo waco ama uu soo diro farriimo SMS ah.
Sidan oo kale, haddii daqiiqad cayiman ay tahay inaad xannibo xiriir ama lambar taleefan oo aan la garaneyn, aad u fudud. Waxaan ku tusineynaa labada dariiqo ee aad ugu adeegsan karto kiiskan, si looga fogaado dhibaatooyinkaas taleefankaaga casriga ah. Tallaabooyinku way ku kala duwanaan karaan hal nooc illaa mid kale, maaddaama lakab kasta uu yeelan karo tallaabo dhexdhexaad ah, in kasta oo ay had iyo jeer isku mid yihiin. Marka dhib kuma lahaan doontid dhammaystirka hawshan taleefankaaga casriga ah.
Sida looga fogaado wicitaanada iyo xannibaadda ogeysiinta markaad ku ciyaareyso moobilkaaga Android
1 Ka jooji barnaamijka taleefanka ee Android
2 Ka jooji barnaamijka xiriirada
Ka jooji barnaamijka taleefanka ee Android
Waxay noqon kartaa kiiska yiri lambarka taleefanka waa qof aan la aqoon ama taasi adigu kuma lihidin ajandahaaga. Laakiin waxaad dooneysaa in lambarkaani uusan fursad u helin inuu mar labaad ku soo waco, sida shirkad dooneysa inay wax kaa iibiso ama qof aadan rabin inaad wada hadasho. Xaaladdan oo kale, ka dib taleefanka taleefanka ee Android laftiisa waan ka joojin karnaa lambarkan.
Waa inaad ka furtaa arjiga on Android marka hore iyo ka raadi lambarka taleefan ee ku qoran galka wicitaanka isku mid ah. Markaan helnay, waa inaan cadaadis dheer saarnaa. Markaad sidan sameyso, xulashooyin taxane ah ayaa soo muuqan doona, oo ay ku jiraan xiritaanka taleefankan ama ku darista liiska madow, taas oo la mid ah kiiskan.
Qaar ka mid ah taleefannada Android, halkii aad ka qaban lahayd, waxaa jira nooc ka mid ah badhanka xulashooyinka ama waa inaan u baahanahay liiska ku jira barnaamijka taleefanka. Gudaha liiska waxaan ka heli shaqo qufulka, halkaas oo aan ku dari karno lambarka taleefanka ee laga hadlayo, si looga fogaado in naloo dhibaateeyo.
Ka jooji barnaamijka xiriirada
Dhinaca kale, waxaa dhici karta in qofkani ku jiro xiriiradayada. Xaaladdan oo kale, marka lagu daro u adeegsiga doorashadii hore, waan awoodnaa xannibo qofkan barnaamijka xiriirada taleefankeena Android. Waxay u baahan tahay dhowr tallaabo, laakiin ma ahan wax adag in la sameeyo gabi ahaanba.
Waa inaan marka hore fureynaa arjiga xiriirada ee taleefanka. Marka xigta, waa inaan qofkan ka raadino liiska xiriirada aan ku leenahay ajendaha. Markii aan helnay, guji magaciisa si aad u gasho bogga astaanta xiriirkan. Ka dib waa inaan isticmaalnaa xulashada menu ama ka badan, iyadoo ku xiran nooca Android. Halkaas waxaan ka helnaa ikhtiyaarka ah qofkan ku dar liiska madow, taas oo lamid ah sida loo xannibo. Tallaabooyinkan hawsha waa la dhammaystiray qofkaasna durba waa la xannibay.
Waxaan ku celin karnaa howsha dad badan inta aan dooneyno. Ma aha wax dhibaato keenaya wakhti kasta. Markaa runtii way fududahay in la helo oo markaa awood u yeelanno in aan ka hor tagno dadkaas na dhibaya ama kuwa aan dooneyno in aan mar dambe la xiriirno xaalad kasta. Telefoonkeena Android wuxuu abuuraa liiska noocan oo kale ah, taas oo macnaheedu yahay haddii qofkani isku dayo inuu na soo waco, ma awoodi doonaan. Farriimaha SMS-ka ee la soo diro lama soo bandhigo, laakiin waxaa jira "spam" saxaarad ah, sidaa darteed si loo hadlo, oo dhammaantood lagu diro. Laakiin ma helno wax ogeysiis ah marka qof noo soo diro farriinta noocan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo xakameeyo nambarka taleefanka ee Android
Kaamirada iyo aqoonsiga wajiga ee Samsung Galaxy M40 waxay hagaajineysaa mahad celinta cusub